Aasaasaha Twitter-ka oo cinwaankiisa laga jabsaday - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaAasaasaha Twitter-ka oo cinwaankiisa laga jabsaday
Washington (JigjigaOnline) – Agaasimaha guud ee Twitter-ka ayaa laga jabsaday cinwaankiisa oo muddo kooban ay gacanta ku hayeen burcadda internet-ka.
Koox isugu yeertay Dhoolacadeynta ayaa sheegatay in ay ka dambeysay weerarka lagu qaaday barta Jack Dorsey.
Cinwaanka oo ay ku xiran yihiin in kabadan afar milyan oo qof, waxaa loo adeegsaday dullaan xadgudub iyo cunsurinimo ah. Waxaana gacanta lagu hayay muddo 15 daqiiqo ah.
Shirkadda Twitter waxay sheegtay in hannaankeeda gudaha aan loo dhicin, taa bedelkeeda waxay eedeeysay koox mobile haystay oo aan la aqoon.
“Lambarka telefoonka ee cinwaanka lagu xiray waa la qariyay sababo la xiriira amniga oo shirkadda telefoonnada ay korka kala socoto”, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Twitter.
“Taas waxay fududeysay in qof aan loo fasixin uu farriimo ka soo diro mobile oo Twitter-ka galay isagoo adeegsanaya lambarkaas. Taasna waa la xalliyay.”
Sidey wax u dheceen?
Qof ka tirsan shirkadda Twitter ayaa BBC u xaqiijiyay in burcadda internetka ay adeegsadeen farsamo loo garanayo “simswapping” (ama “simjacking”) taas oo siisay in uu maamulo cinwaanka Mr Dorsey.
Tani waa farsamo ah lambar telefoon oo jira – oo markan ah midka ku xiran cinwaanka Dorsey – waxaa lagu wareejiyay simkaar kale oo aalaaba uu qofka weerarka qaaday uu ku helay qiyaameynta ama laaluush la siiyay qof ka shaqeeya shirkadda telefoonada.
In lambarka ay la wareegaan waxay burcadda fursad u siiyay in Twitter-ka ay ku qoraan farriimo toos u galaya barta Dorsey.
Inkastoo dhowaanahan tirada ugu badan ay isticmaalaan app-ka mobile-ka ee farriimaha tweet-ka, xilliyadii hore, naqshadda twitter-ka waxay ahayd farriin cusbooneysiin ah – maadaama tirada xuruufta ay koobnaayeen – Shirkadda meesha kama aysan saarin taa, waxayna qeyb ka tahay isticmaalkeeda dalalka horumaray ee qiimaha internet-ka uu qaali yahay.
Maxay burcadda baahiyeen?
Farriimaha xadgudubka ah, oo qaarkood si toos ah loogu daabacay barta @jack iyo kuwo dib looga soo baahiyay meelo kale, waxaa lagu adeegsaday xarafka n waxaana lagu qoray farriimo ka dhan ah Yuhuudda iyadoo la tixraacayay Holocaust.
Hal farriin waxa lagu sheegay in bam uu dhexyaallo xarunta guud ee shirkaddan Twitter.
Bar kale oo wada sheekeysi oo si gaar ah ay kooxda “Dhoolacadeynta” u sameyteen, waxaa si kaftan ah loogaga hadlay weerarka – balse si degdeg ah ayaa hawada looga saaray.
Kooxdan ayaa sheegatay masuuliyadda weerarro dhowr ah oo lagu qaaday dad caan ah sida James Charles iyo bar uu lahaa nin caan ka ahaa YouTube-ka, Desmond Amofah, kaas oo horraantii sannadkan u dhintay wax loo maleynayo isdilid.
Iyadoo ay muuqato in weerarka laga soo qaaday meel ka baxsan Shirkadda, haddana waxay ceeb ku tahay Twitter-ka oo ah bar bulsho oo ay si weyn u isticmaalaan hoggaamiyayaasha ugu awoodda badan dunida.